Soo-saaraha dareeraha heerkulka gawaarida ee Shiinaha - Tayada Sheegida heerkulka dareeraha - Testeck Co., Ltd.
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka > Qalabka dareeraha heerkulka
Qalabka muhiimka ah ee RTD
Waxaa lagu aasay matoorka koronto-dhaliye stator, marka birta birta ah la isku dhejiyo, walxaha cabbirka heerkulka lama kala saari karo. Walaaca ugu badan waa xasiloonida muddada-dheer iyo nolosha adeegga.
Motor fuuli jiray RTD
Ku duuban qaybaha kala wareega ee aan la taaban karin ka dib marka matoorka la soo saaro, oo aan si fudud lagu beddeli karin. Degganaanshaha muddada-dheer iyo cimri dhererka ayaa si gaar ah muhiim u ah Qaybaha: Qaybaha nabarrada siligga si loo hubiyo in heer-kulka is-kululeynta yar uu kordho.
Isku-xidhka qaab-dhismeedka isku-dhafan ee RTD
Heerkulka sare iyo cadaadiska sare ee isku dhafan sameynta dareeraha heerkulka ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro heerkulka stator ee matoorrada waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
shidma dareeraha heerkulka
Heerkulka sare iyo dareeraha heerkulka isku dhafan ee cadaadiska sare waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro heerkulka stator ee koronto-dhaliyeyaasha waaweyn iyo kuwa dhexe.
Dabeylaha dareeraha heerkulka stator
Dabaysha RTD (TW2010Pt100-100-3-3204 / 00F200 / X) waxay leedahay kor u kac heer kulka yar iyo cabirka heerkulka lagu kalsoonaan karo.
Stator dareeraha heerkulka
Nooca Chip-ka dareeraha heerkulka stator (T2010Pt100-100-5-3200 / 01) wuxuu leeyahay kor u kac heer kulka yar iyo cabirka heerkulka lagu kalsoon yahay.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Qalabka dareeraha heerkulka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Qalabka dareeraha heerkulka kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.